Mayelana NATHI - UMBALA OMUSHA BEAUTY CO., LIMITED
Ucingo: + 86-769-8122 6809
Ucingo: +86 136 6298 7261
Ijusi lekati lekati
INew Colour Beauty Co., Inqunyelwe
iyinkampani ethembekile ethembekile yeGel Polish eChina.
Kusukela ngo-2010, thina benza ucwaningo, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa, ukudayiswa kanye service of a sína of highquality UV Gel imikhiqizo Polish.
Imikhiqizo yethu yejel ifaka phakathi: Isinyathelo esinejeli, Isinyathelo esinejeli, Isinyathelo esisodwa sejel, Ijazi le-Top & Base, Ijeli le-Builder, i-Polygel, Qinisa ijeli,
I-gel yokudweba, i-gel enemibala emsulwa, i-Platinum gel, i-Transfer gel,
I-Gel embossing njalonjalo. Kunemibala engaphezu kuka-2000 futhi ngokuzikhandla kweqembu lethu le-R & D,
imibala eminingi nejel iyajoyina
Ukholo lwethu “luhlaza nezempilo, ikhwalithi enhle kakhulu, imfashini, ukubika, izindleko ezivumayo, isevisi yezinga lokuqala”. Ukuqondisa ukuthuthuka okunempilo kwale mboni, sigcizelela ngokusobala ukuhamba ngomgwaqo wabakhiqizi be-gel polish yezemvelo, enobungani nenempilo.Yonke imikhiqizo yethu ivunyelwe izitifiketi ze-SGS, i-FDA ne-GMPC futhi ihlangabezana nomthetho wendawo wezimakethe phesheya kwezilwandle.
Ifomula yethu inokuvumelana okuhle nokuhlanganiswa, ukuzizwa okuhle ngopende, ukuthungwa okubushelelezi nokuhlala isikhathi eside, noma yini kusuka ezintweni eziyisisekelo noma i-pigment, ayinabo ubuthi futhi ayinabungozi, zonke ziyizithako eziyi-10 mahhala futhi zikhiqizwa kuphela ngemuva kokuthi abasebenzi be-laboratory abasebenza ngaphakathi izimpahla. Ukuqinisekisa ukuthi yonke i-gel polish isezingeni elifanele, sinenqubo yokukhiqiza eqinile kakhulu, izixhobo zokukhiqiza ezithuthukile, inqubo yokuhlola ye-QC, ochwepheshe nabasebenzi abaqeqeshiwe.
Ukubamba ukuthambekela kwemfashini nokuxhasa umkhiqizo wangokwezifiso uqhubekela phambili, sineqembu elikhethekile lokuthuthukisa ifomula entsha nemibala emisha njalo ngonyaka, sisekela amakhasimende anezinhlobo ezahlukahlukene zokupakisha okwenziwe ngezifiso, kufaka phakathi ibhodlela eliphrintiwe, ilebula langasese namabhokisi ombala .Nabasebenzi abanekhono abangaphezu kuka-150 efektri, sinikeza amandla amakhulu nesikhathi esisheshayo sokuhola.
Uyemukelwa ukuxhumana nathi, silindele ukuqhubekela phambili nawe ndawonye embonini ye-gel polish ngesimo sokuwina-win!
Indawo Yezimboni, iXiaohe Village, iDaojiao, iDongguan, GD, China